Tsika PB2000A-PB6000A Mhepo inotonhorera mhando block block yekugadzira muchina Mugadziri uye Mutengesi | Dongshen
PB2000A-PB6000A Mhepo inotonhorera mhando block block yekuumba muchina
EPS Block richigadzirisa Machine inoshandiswa kuita EPS kutigumbura, uye kucheka kuti machira imba kuputira kana kurongedza. Zvigadzirwa zvakakurumbira zvakagadzirwa kubva kumashizha ePSS sandwich mapaneru, 3D mapaneru, emukati uye ekunze madziro ekuputira emadziro, kurongedza kwegirazi, fenicha kurongedza nezvimwe.
EPS Mhepo inotonhorera block yekuumba muchina inokodzera diki chinzvimbo chikumbiro uye yakaderera density density inogadzira, ndeye hupfumi EPS muchina. Nekombiki yakasarudzika, yedu Yemhepo Inotonhora Block richigadzirisa Machine inogona kuita 4g / l density matombo, block yakatwasuka uye yehunhu hwakanaka.
Muchina unopedzisa nemuviri mukuru, control box, blower, kuyera system nezvimwe.
1.Muchina unotora Mitsubishi PLC uye Winview touch screen ye otomatiki kuvhura chakuvhuvhu, kuvhara chakuvhuvhu, kuzadza zvinhu, kupisa, kupisa kwekuchengetedza, kutonhora kwemhepo, kudonhedza uye kurasa.
2. Mashini ese matanhatu mapaneru ari kuburikidza nekupisa kwekurapa kuburitsa kunetseka kwekusimbisa, kuitira kuti mapanera asakwanise kuora pasi pekupisa kwakanyanya;
3. Mould mhango inogadzirwa neakasarudzika alloy alloy ndiro ine yakakwira-inoshanda kupisa conduction, aruminiyamu ndiro ukobvu 5mm, ine Teflon yekupfeka kuitira nyore demoulding.
4. Mushini wakagadzira kumusoro-kumanikidza blower yekukweva zvinhu. Kutonhora kunoitwa ne convection mweya neanofuridza.
5. Mahwendefa emuchina anobva kumhando yepamusoro yesimbi, kuburikidza nekupisa kwekupisa, yakasimba uye hapana deformation.
6. Ejection inodzorwa ne hydraulic pombi, saka ese ejectors kusunda uye kudzoka panguva imwecheteyo kumhanya;
Pashure: SPB2000A-SPB6000A EPS Adjustable Type Block richigadzirisa Machine
Zvadaro: PB2000V-PB6000V Vacuum mhando block block kuumba muchina